फेरी मेस्सीले गरे सिटीका यी स्टार बार्सिलोना भित्र्याउन अस्विकार !! - Experience Best News from Nepal
फेरी मेस्सीले गरे सिटीका यी स्टार बार्सिलोना भित्र्याउन अस्विकार !!
क्यटालान क्लब बार्सिलोना हाल टिम समायोजन र ब्यबस्थापनमा जुटेको छ, विभिन्न खेलाडी चोट अवस्थामा र खेल स्तरमा नदेखिदा बार्सिलोनाले निर्णयमा समेत ब्यबस्थापन ल्याएको हो । निर्णय अनुसार बार्सिलोनाले आफ्नो प्रस्ताव क्लब जायन्ट लिओनेल मेस्सीसंग राख्दै गर्दा मेस्सीले विभिन्न खेलाडी प्रति आफ्नो बेखुसी समेत देखाउदै आएका छन् ।
हालै बार्सिलोनाले इन्ग्लिश क्लब म्यानचेस्टर सिटी मार्फत एक खेलाडी चयन गरेको छ, राहीम स्टार्लिंग । उक्त निर्णयम प्रति लिओनेल मेस्सीले आफ्नो अस्विकार ब्यक्त गरेका छन् । पुर्बी लिभरपूल स्टार राहीम प्रति लिओनेल मेस्सीले बेवास्ता प्रकट गरेका छन् जसको मूल कारण हो नेय्मार । मेस्सीको प्रबल सोचमा एक मात्र खेलाडी परेका छन् नेय्मार, ग्रिजम्यान बार्सिलोना प्रवेश गर्नु अघि समेत मेस्सीले उक्त क्लब विचार प्रति अस्विकार गरेका थिए ।
स्टार्लिंग माथि १८५ मिलियन यूरोको मूल्य सुची लागेको छ जो हाल सर्वाधिक मूल्य बोकेका खेलाडी एम्बाप्पे पछाडी छन् ।
बार्सिलोना खेलाडी प्रति विश्वको ध्यान र मिडियाको ध्यान खिचिएको हुदा स्टार्लिंगको योजना र रहर बार्सिलोना तिर रहेको बार्सिलोना समर्थन अनलाइनले बताएको छ । डोन बालोनका अनुसार नेय्मारको रहर हुदै गर्दा कदापि इन्ग्लिश खेलाडीलाई क्लबमा ल्याउन मेस्सीले स्वीकार नगर्ने बताएको छ । ठुलो माहोल गत सिजन चल्दै गर्दा बार्सिलोनाले आफ्नै प्रतिद्वन्दी मड्रिडग्रिजम्यान भित्र्याएको थियो ।
स्टार्लिंग एक कहलिएका इन्ग्लिश विंगर हुन्, उनले २२ प्रिमिर लिग खेलमा ११ गोल गरिसकेका छन् ।